Afrika - Mag tsy mampino
Fitsidihana Safari manokana any Afrika no drafitra fialan-tsasatra tsara indrindra hijerena ny fiainana dia
Tsy mitsahatra mandray andraikitra i Afrika Atsimo amin'ny altruism lehibe ataon'ireo mpanao vakansy manerana an'izao tontolo izao. Na dia nihena tamin'ny tanjona lehibe indrindra aza ny fifanarahana tamin'ny taona 2003, ity firenena ity dia nahitana fivoarana 6.5% tsara, araka ny World Tourism Organization. Voadaka ny fampandrosoana…
Mikaroka an'i Azia ary manandrana zavatra mahafinaritra
Ianao ve mba efa nieritreritra ny handeha amin'ny toerana tsy mbola nalehanao ary nitady zavatra tsara mbola tsy hitanao na notadiavinao tany amin'ny toerana hafa? Raha nieritreritra momba ireo zavatra ireo ianao, nefa tsy nanam-potoana hanaovana izany, mety izao dia izao no mety…
Ny maha-zava-dehibe ny fampihetseham-batana sy ny fiasa ara-batana amin'ny fialantsasatrao
Oktobra 24, 2016
Liana amin'ny fampidinana ny vintana amin'ny aretina ve ianao? Te hanatsara ny fahasalamanao ara-tsaina sy ara-batana ve ianao? Hatsarao ny bika aman'endrinao? Manalavitra ratra? Hatsarao ny vokatrao any am-piasana sy any an-tranonao? Izany indrindra no antenainao…
Manatevin-daharana tobin'ny Muay Thai sy fialan-tsasatra any Thailandy - Hevitra tsara
Oktobra 21, 2016
Miaina amin'ny vanim-potoana izay misy lehilahy sy vehivavy maro miatrika olana ara-pitsaboana matotra isika na dia mandroso aza ny fitsaboana ary mahazo ny sakafo, rano ary toeram-pitsaboana ny ankamaroan'ny olona. Raha manontany tena ianao hoe maninona no mitranga izany, ny fohy…